GroupSolver: Ukunyusa i-AI kunye ne-NLP kuPhando lweMarike | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Oktobha 30, 2020 NgoLwesihlanu, Oktobha 30, 2020 Douglas Karr
Ukuba ukhe wenza uphando kwaye unethemba lokufumana iziphumo zobungakanani kunye nomgangatho kwiimpendulo, uyaqonda ukuba kunzima kangakanani ukubuza imibuzo. I-verbiage, ulwakhiwo kunye negrama oyibuzayo kungakhokelela kwiziphumo eziza kukhokelela kuphando oluphosakeleyo.
Njengomphathi wemveliso, ndabalekela kule kakhulu ngamaqela ekugxilwe kuwo. Ukuba bendivavanya ujongano lomsebenzisi omtsha, ukubuza ingxelo kungenza ukuba umamkeli ajonge ujongano ukuze azame ukufumana into engalunganga… ngaphandle kokuyilwa kakuhle. Ukuba ndibuza ukuba kukho into enzima okanye kukho into engekhoyo, umsebenzisi uya kujonga kwangoko ingxaki… enokungabikho.
Endaweni yokuba simane sicela umsebenzisi ukuba athathe amanyathelo kwaye achaze ukuba bahamba njani malunga nesenzo. Ngelixa oku kususileyo nakuphi na ukuthanda icala, kufuna uhlalutyo oluninzi lwezithuba ukulinganisa iziphumo kukucingelwa komgangatho okanye kwizindululo. Ezo ziphumo zazisoloko ziyi- olona qikelelo… Hayi a isiphelo esisemthethweni.
Inkqubo yoLwimi lweNdalo kunye noFundo loMatshini
Olunye lolona lutyebileyo, oluninzi ulwazi oluguquguqukayo luvela ngokubuza imibuzo evulekileyo. Ngoba ngumzekelo ogqibeleleyo. Kodwa impendulo ngoba ayisiyo manani, ibhanari, okanye impendulo yempendulo… ke bekusoloko kunzima ukufumana iziphumo ezinobungakanani kunye nomgangatho owufunayo ngokubuza imibuzo evulelekileyo ukukhokela izigqibo zeshishini.
Ngombulelo, Ukulungiswa kolwimi lwendalo (NLP) kunye yokufunda umatshini (ML) ingoyisa le micimbi! Ngokudibanisa ukufunda komatshini kunye nesihlwele sabantu, IQelaSolver liqonga lobuchwephesha bophando olusebenzisa ubukrelekrele bokubuza nokudibanisa umgangatho kunye nemibuzo efumanekayo kuphando lwe-Intanethi.
IqelaSolver lingena phakathi kwamaqonga owenzayo, anje ngeSurvey Monkey kunye noPhando lukaGoogle, kunye neenkampani zophando ezigcweleyo, ezinje ngeMcKinsey kunye neNkampani kunye neAccenture.
Yintoni ebeka iGroupSolver ngokwahlukeneyo yindlela yabo yokwenza iimpendulo zolwimi lwendalo, kusetyenziswa:
Isihlwele sobukrelekrele -Abaphenduli baphendula imibuzo evulelekileyo ngamazwi abo, emva koko bayasebenzisana.
U kufunda -Iimpendulo ezivela kwimibuzo evulelekileyo zenziwa nge-algorithm enamandla kunye nokuzenzela.
Iinkcukacha-manani eziPhambili -Iqonga liqinisekisa iimpendulo zolwimi lwendalo kunye nokulinganisa ukuqonda okusemgangathweni.
Izixhobo zeQelaSolver zibandakanya
AI iimpendulo ezivulekileyo ™ -Ngokudibanisa ukufundwa komatshini kunye nobukrelekrele babafundi, iQelaSolver licwangcisa ngokuzenzekelayo kwaye libale iimpendulo ezivulekileyo. Akukho qeqesho lwedatha, akukho ukumodareyitha komntu, kwaye akukho khowudi yasimahla-yokubhaliweyo iyafuneka.
IdeaCluster ™ -IdeaCluster ibonisa unxibelelwano phakathi kweempendulo ezivulekileyo ezizimeleyo. Iluncedo kakhulu xa usakha ii-personas zabathengi okanye ubalisa ibali lebrendi. Kulungile-iQelaSolver likhulule unxibelelwano kunye neemodeli zokuhlengahlengiswa kubudlelwane obukhethekileyo nedatha yobungakanani.
IntelliSegment ™ Icandelo lobukrelekrele sisixhobo sokwahlulahlula izinto ezikrelekrele esinokukunceda ukuba uqonde indlela iimpendulo zemibuzo evulekileyo ezahluka ngayo kumacandelo athile abaphendulayo. Kufana nokufumana ibali kwifula.
IdeaCloud ™ I-IdeaCloud ngumboniso odibeneyo kunye nokubekwa phambili kwezona mpendulo zixhaswayo kumbuzo ovulekileyo. Ifonti enkulu ibonisa iimpendulo ngenkxaso ephezulu phakathi kwabaphenduli. Ifonti encinci ye… kakuhle, iimpendulo ezingakhange ziyenze.
Isisombululo semvumelwano ™ Isisombululo seMvumelwano siseti yeempendulo ezixhaswe kakhulu ezinxulumene ngokuqinisekileyo nomnye nomnye. Ibonisa iimpendulo ezihamba kakuhle kwaye zenza isivumelwano sokuvumelana phakathi kwabaphenduli.
Ukukhetha iimpendulo -Ngaphandle kwesonka kunye nebhotolo yophando, iimpendulo kwimibuzo ekhethiweyo zinokuba luncedo ekwakheni abantu abaphendulayo ukuze babe nokuqonda okutyebileyo. Sizigcina zintsha kwaye zihlaziywa ngexesha langempela.
Umngenisi weDatha -Ukuba sele uqokelele ulwazi malunga nabaphenduli bakho, ungalufaka kwideshibhodi yethu. Yisebenzise ukusika idatha yeQelaSolver okanye ukwakha amacandelo aphendulayo.
Umphathi weMpendulo -Bukela indlela abaphendula ngayo xa bephendula imibuzo yakho ngexesha lokwenyani. Iqela kwaye uqinisekise ngokuchofoza iqhosha. Siyamthemba umatshini wethu, kodwa idatha ngamanye amaxesha ifuna ukubanjwa ngabantu.
Umkhupheli weDatha -Thumela ngaphandle idatha eluhlaza kuhlalutyo oluthe kratya kunye nesoftware yeenkcukacha manani ezinje nge-SPSS, R, okanye i-Excel.
Ideshibhodi ebonakalayo yeQelaSolver yenza ukuba abasebenzisi bajonge kwaye basebenze ngokuqonda kwakho. Idatha iyaqhubekeka kwaye ihlaziywe njengoko iqokelelwa, ukuze ujonge iziphumo nangaliphi na ixesha.
Cela iDemo yeQela
tags: aikukubhadla okungeyonyaniiqelauphando lwemakethiiqonga lophando lwentengisomlUkulungiswa kolwimi lwendalonlp